Vacuum Cooler, Vacuum vacuum cooler, Foods Vacuum cooler - ALLCOLD
Afaka mihinana azy ianao
Ny sakafo vaovao indrindra
ALLCOLD no banga amperin'asa manerantany amin'ny vahaolana mangatsiatsiaka & fantsom-pamokarana fanodinana volo, miaraka amin'ny SEMCOLD USA (voarohirohy amin'ny fampangatsiahana rivotra sy fampangatsiahana mihoatra ny 80 taona), ny Vacuum Coolers natao ho an'ny legioma mangatsiaka, voninkazo Fresh Cut, Sakafo namboarina, Central Kitchen, Holatra, sakafo masaka & vary sushi, compost & turf sns.
FITANDREMANA sy SERVIKA avo lenta
ALLCOLD no banga amin'ny mpitondra eran'izao tontolo izao amin'ny vahaolana mangatsiatsiaka sy fantsom-baravarana fanamboarana
ALLCOLD dia orinasa teknolojia avo lenta natokana ho an'ny R&D ary manana trano 10.000m2 any Dongguan China
NY KARAZANA LEHIBE INDRINDRA
Sakafo masaka masaka masaka
Hafainganana haingana, haingana dia maharitra 30 minitra vao mangatsiaka amin'ny 100 ℃ ka hatramin'ny 10 ℃. Ny hafanana fanamainana fanamiana eo afovoany sy ambonin'ny sakafo. Tsy misy fepetra manokana momba ny habeny, ny fisehoany ary ny fomban'ny vokatra TSY misy "fandotoana faharoa" ho an'ny fampangatsiahana ao anaty efitrano vy tsy mitoka-monina. Mamaky haingana ny maripana 25-50 ℃ izay tena mety amin'ny karazana bakteria. Ny volo fampangatsiahana AllCOLD izao dia be mpampiasa amin'ny fampangatsiahana ny ...
Cooler Vacuum Foods steamed
Modela sy fantsom-panafody mangatsiaka kokoa: Vacuum Cooler Main Feature 1. hafainganam-pandeha haingana. Ny sakafo masaka nangatsiaka hatramin'ny 10 ℃ dia mila 20-30 fotsiny, ny sakafo nandrahoina nampangatsiahina hatramin'ny 20 ℃ ao anatin'ny 10-20min. 2.Cooling fanamiana. Eo ambanin'ny banga, ny sakafo mangatsiaka hatrany amin'ny fotony ka hatrany ambonin'ny. 3.Fangatsiahana dingana roa hampihenana ny fahaverezan'ny rano sakafo. Manomboka amin'ny hafanana avo ka hatramin'ny 60 ℃, ny sakafo dia hangatsiaka haingana hisorohana ny fitomboan'ny bakteria haingana, ny fitehirizana faharoa kosa dia hampihena ny fampangatsiahana hampihenana ny fahaverezan'ny etona, ary ny fanatsarana ny tsiron'ny sakafo. 4.M ...
Maso mangatsiaka ao anaty bakery
Tombontsoa azo avy amin'ny fampangatsiahana rivotra ALLCOLD? 1.Ultra-fomba fihenan'ny haingam-pandeha manodidina ny 20mins / cycle. 2.Ny talantalana kokoa noho ny 2-3time. 3.Ny tahiry angovo mihoatra ny 40%. 4.Minimum ny fahasimban'ny vokatra. Fa maninona no mampiasa Vacuum Cooling? Raha vao jinjaina dia miady saina ny rehetra. Io fihenjanana io dia miteraka fisefoana (fisefoana) sy fifindrana (tsemboka) izay nateraky ny hafanana indrindra. Ny legioma sy ny legioma ary ny taovam-pisefoana sy ny taovam-pisefoana dia azo ahena 75% na mihoatra ny «cooler vacuum». O ...
Turfs Vacuum Cooler
Tombony ho an'ny vacuum cooler (1) Tazomy ny kalitaon'ny turfs tsara indrindra. (2) Ny fotoana mangatsiaka dia fohy, amin'ny ankapobeny manodidina ny 15- 20 minitra. Haingam-pandeha, madio ary tsy misy loto. (3) Afaka manakana na mamono botrytis sy bibikely. Ny fahasimbana madinidinika amin'ny ravina sy ny zana-kazo dia azo "sitrana" na tsy hitohy hitatra. (4) Ny hamandoana nesorina dia mitentina 2% -3% fotsiny amin'ny lanjany, tsy misy fanamainana sy fiovana eo an-toerana (5) Na dia tratra amina orana aza ny zana-kazo, ny hamandoana amin'ny tany dia azo esorina ambanin'ny v ...
Cooler Vacuum ho an'ny holatra
Mampiavaka ny vacuum cooler (1) Tehirizo ny holatra sy ny kalitao (loko, hanitra, tsiro ary otrikaina) holatra! (2) Ny fotoana mangatsiaka dia fohy, amin'ny ankapobeny manodidina ny 15- 20 minitra. Haingam-pandeha, madio ary tsy misy loto. (3) Afaka manakana na mamono botrytis sy bibikely. (4) Ny hamandoana nesorina dia mitentina 2% -3% fotsiny amin'ny lanjany, tsy misy fanamainana sy fanovana eo an-toerana (5) Mitovy ny mari-pana amin'ny atiny sy ny atiny. (6) Noho ny fampangatsiahana mialoha, ny holatra dia afaka mitazona fitahirizana lava kokoa. Maninona izahay no mampiasa banga c ...
Herbs Vacuum Cooler
Tombony ho an'ny vacuum cooler (1) Tazomy ny zavamaniry tsara indrindra. (2) Ny fotoana mangatsiaka dia fohy, amin'ny ankapobeny manodidina ny 15- 20 minitra. Haingam-pandeha, madio ary tsy misy loto. (3) Afaka manakana na mamono botrytis sy bibikely. Ny fahasimbana madinidinika amin'ny zavamaniry dia azo "sitrana" na tsy hitohy hitatra. (4) Ny hamandoana nesorina dia tsy mitaky afa-tsy 2% -3% amin'ny lanjany, tsy misy fanamainana sy fiovana eo an-toerana (5) Na dia alaina amin'ny ranonorana aza ny ahitra, ny hamandoana amin'ny etona dia azo esorina ao anaty banga. (6) Du ...
Allcold Zone, Xiajie, Qishi Town, Dongguan, Provinsi Guangdong, Sina